Blog of Nyein Chan Yar: 2006.06
တစ်ချိန်က ရဲရင့်နီမောင်းတဲ့ ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး နဲ့ ခွပ်ဒေါင်းကျောင်းသားတို့ရဲ့ ဦးသန့်ဈာပန ကျောင်းသား အရေးအခင်း၊ မှိုင်းရာပြည့် အရေးအခင်း တွေအကြောင်း ကို Burma today မှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
၁၉၇၆ ခု။ ဂျွန်၂၆ ရက်နေ့ (နံနက် ၄ နာရီ) အင်းစိန်ထောင်မှာ စစ်အစိုးရက ဆလိုင်း တင်မောင်ဦးကို လှို့ဝှက်စွာ ကြိုးပေး သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်၊ သမိုင်းမှာ မကြုံစဘူး ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးကို အခုလို ကြိုးပေး သတ်ဖြတ်ခဲ့တာဟာ စစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့ အတွေးခေါ်အားဖြင့် နိမ့်ကျလွန်း ချွတ်ခြုံကျလွန်းလှတဲ့ အချက်ကို သက်သေ ပြလိုက်တာဖြစ်ပြီး စစ်အစိုးရအတွက်သမိုင်း အမဲကွက်ကြီး အဖြစ် ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်၊ တစ်ဖက်မှာ ရှည်ကြာပြီး မပြီးဆုံးသေးတဲ့ ပြည်သူ့လွတ်မြောက်ရေး အရေးတော်ပုံကြီးအတွက်။ အသက်သွေး။ ချွေးတို့နဲ့ ရေးသား ကဗျည်းထိုးခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား အာဇာနည် တစ်ဦး ပေါ်ထွန်းခဲ့တာမို့ နောင် မျိုးဆက်သစ်တွေ အတွက်။ အတုယူစရာ အရေးကြီးတဲ့ သမိုင်းမှတ်တိုင် တခု ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။
“ရဲဘော်တို့လူသူမသိအောင် ငါ့ကို သတ်ဖို့သူတို့ လုပ်နေကြတယ်၊”
“မင်းတို့ ရဲ့စစ်ဖိနပ်အောက်မှာ ငါ ဘယ်သောအခါမှ ဒူးမထောက်ဘူး၊”
- ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး ၏ နောက်ဆုံးစကားများ-
Posted by Daythanix Chann at Tuesday, June 27, 2006 1 comment:
This blog will be paused foracouple of weeks.
Don’t go away. Stay with me. I’ll be back.
UPDATE: (June 27, 2006)
My trip was postponed and I'm back to my blog now.
Posted by Daythanix Chann at Wednesday, June 21, 20065comments:
MyMyamar Myanmar Unicode System
MyMyanmar ကို စမ်းသုံးကြည့်ဖြစ် ပါတယ်။ Font က input system ကို​လို​က်ပြီး Unicode အပြည့် အဖြစ်နဲ့ရော partial အဖြစ်နဲ့ပါ အလုပ်လုပ် ပါတယ်။
Unicode အပြည့် ဖြစ်တဲ့ MyMyanmar X မှာ ပုံမှန် အက္ခရာနဲ့ ပါဌ်ဆင့် အက္ခရာ ဟာ ရိုက်ရင်လည်း အတူတူပါပဲ code ကလည်း အတူတူပါပဲ။ ရရစ် အကြီး အသေး ဆိုလည်း တစ်မျိုးတည်း ရိုက်ရုံပါပဲ။ code မှာက (်+ရ) ပါ။ ယပင့်ကတော့ (်+ယ) ပါ။ တစ်ချောင်းငင် အတို အရှည် တွေလည်း ဒီသဘောပါပဲ။ နှစ်မျိုး မရှိပါဘူး။ နောက်ပြီး စာရိုက် တဲ့အခါမှာလည်း ရရစ်ကို အရင်ရိုက်စရာ မလိုပဲ (က+ြ =ကြ) ဖြစ်ပါတယ်။ အခြား function တွေဖြစ်တဲ့ စားလုံးပေါင်း အမျိုးမျိုး မမှားအောင် လုပ်ထားတာ၊ သဝေထိုးကို နောက်မှ ရိုက်စရာမလိုတာ၊ auto word wrapping အတွက် စာလုံးတွေ break လုပ်ထားတာတွေ အကြောင်းကို ဒီ pdf file မှာ အပြည့်အစုံ ဖတ်ကြည့်ပါ။
အဆင်မပြေတာလေး တွေကတော့ keyboard ပြောင်းရင် keyman ကိုပါပြောင်းနေရလို့ (ctrl+shift) နှိပ်ရုံနဲ့ မပြီးပါဘူး။ ကျန်တာ အားလုံးကောင်း ပါတယ်။
နောက် ကျွန်တော်တို့ Blogger သုံးသူတွေအတွက် Fierfox မှာ font ရဲ့ function တွေ အလုပ်မလုပ်တဲ့အတွက် ဒီblogမှာ သုံးလို့မရပါဘူး။ ဒါက အရင် myanmar1 နဲ့လည်း ဒီလိုပါပဲ။ Blogger ရဲ့ script တစ်ချို့ကြောင့်ထင်ပါတယ်။ တစ်ခြား site မှာသုံးရင် ကောင်းပါတယ်။ IE မှာ ဆိုလည်း ကောင်းပါတယ်။ Blogger နဲ့ Firefox တွေ့မှသာ ပြဿနာ။
MyMyanmar ကိုဒီမှာ download လုပ်ပါ။ (font, KB installer, documentation အားလုံးပါတဲ့ self-extract package.)
ကိုလွင်မိုးရဲ့ site မှာ MyMyanmar, Myanmar1, Padauk စတဲ့ font တွေနဲ့ ပတ်သတ်လို့ standard လို့ပြောလို့ ရမရ စတာတွေကို ဆွေးနွေးထား ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဖတ်ကြည့်ပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ font အားလုံးကို character map တူစေချင် တာပါပဲ။ ဒါမှ font-family ဆိုပြီး အားလုံးကို ထည့်ရေး လို့ရမှာ။
Categories / tags: Myanmar, Font,
Posted by Daythanix Chann at Saturday, June 10, 2006 8 comments:
Ma May’s blog, emotional corner, has in depth instructions on how to apply for graduate studies in Singapore Universities for Myanmar students. Normally, such well explained information is hard to find for people in Burma. Well done, May!!!
NUS (National University of Singapore) နဲ့ NTU (Nanyang Technological University) မှာ Master Degree in Enginnering တက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် ကိုယ်သိသလောက်တွေကို ပြန်ပြောပြချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ပါ။ YTU, MTU ကနေ B.E, M.E ပြီးပြီးတော့ ဒီမှာ Master နဲ့ ကျောင်းတက်နေကြတဲ့ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာတွေ ခုဆိုရင် 30% to 40% ရှိနေပါပြီ။ ကိုယ်တက်တုန်းကလဲ ကိုယ့်ရှေ့က တက်နေတဲ့ Senior တွေကိုမေး၊ သူတို့က ကျောင်းလျှောက်ပေးလို့ အဆင်ပြေတာပါ။ ကျွန်မသိသလောက် ရေးထားတာဖြစ်လို့ ...
Further Study at Singapore
Prepare the Application foms & attached documents
Studying & Living at S'pore
Posted by Daythanix Chann at Friday, June 09, 20062comments:
Myanmar blogs I noticed
Mayvelous | Little Mayvelous Things
အိပ်မက်များ Community blog with awesome artistic posts
ငါတို့ရဲ့  အော်သံများ
Speaking out loud | madyjune-mm
Kalvin's webdiary .
Posted by Daythanix Chann at Thursday, June 08, 2006 10 comments:
Crash ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကို ဒီနေ့ ကြည့်ဖြစ်လိုက် ပါတယ်။ ဒီကားကို technorati မှာ အကြာကြီး (ဒီနေ့ထိ) တွေ့နေရတာမို့ ဒီကား အကြောင်း တော်တော် blog ကြတယ် ဆိုတဲ့ သဘောပေါ့။
ဒီ ရုပ်ရှင်ကို ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ တွေးစရာတွေ အများကြီး ပေးသွားပါတယ်။ အသားအရောင် / လူမျိုးရေး ခွဲခြားမှုနဲ့ပတ်သတ်လို့ အဖြူကရော ကောင်းလား၊ အမည်းကရော ကောင်းလား၊ ဆိုးတဲ့သူက ဘာကြောင့် ဆိုးတာလဲ၊ အနှိမ်ခံရသူဟာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အမြင်မကြည်လင်ပဲ ပိုဆိုးသလား၊ အားလုံးဟာ တစ်ခုနဲ့ တစ်ခု အပြန်အလှန် သက်ရောက်မှု တွေကြောင့်သာ ဖြစ်ပြီး လူမျိုးရေး အသားအရောင် တွေကို ကြားထဲက ခုတုံးလုပ် တံဆိပ်ကပ် ပစ်မှတ်လို သဘောထားနေ ကြရာက chain reaction ကြီးလို ဖြစ်နေသလား ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတွေ ကျန်ခဲ့စေတဲ့ မဖြစ်မနေ ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားပါပဲ။
Starring: Sandra Bullock, Don Cheadle, Matt Dillon, Jennifer Esposito, William Fichtner
Posted by Daythanix Chann at Sunday, June 04, 2006 1 comment:
Otep - Thots
the senates still corrupt
& the emporer remains insane
isanew strain of slaughter
supply lines are less protected
evil on all sides
eye can smell the death on your flesh
-- creeping in
trapped within the twisting fingers of fear
and all eye see is ewe
burning like leprosy
eye can see u there
and eye want to attack
to rip out your heart and lay your flat on your back
and vomitaworld of agony and truth
into your throbbing illness of memory
... and hate guides our way
eye long for the icy slap ofabelt across my back
for the acceptance of death and blind cave war
the giving sleep of depression
the sweet elucidation of savage, meaningless aggression
chiseled in the meaty forearms of Mother Jupiter and his slave disciples
in the harem tents - outside
just beyond the edges - eye ride
a cycloptic mare in the fires of imagination
a river of plagues
eye need something to remind me eye am still sinning
that pain in important
that wurdz matter
that healing in possible
that eye am not alone ... in this
- guard the houses
- triple the watch
- maidens, dig up your sorcery
- sirens, sharpen your rocks
... ewe will eat my pain again
whatever u need
unite messiah ME
Lyrics by Otep